Meghan Markle နှင့်မင်းသားဟယ်ရီတို့သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိရောင်ရမ်းသည့်တိုင်ကြားချက်အတွက်အိမ်တစ်လုံးကိုရှာဖွေနေကြသည် - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် Meghan Markle နှင့်မင်းသားဟယ်ရီတို့သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိရောင်ရမ်းသည့်တိုင်ကြားချက်တစ်ခုဖြင့်အိမ်တစ်လုံးကိုရှာဖွေနေကြသည်
Meghan Markle နှင့်မင်းသားဟယ်ရီတို့သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအိမ်တစ်အိမ်ကိုရောင်ရမ်းခြင်းတိုင်ကြားမှုဖြင့်ရှာဖွေနေကြသည်
စုံတွဲသည်ကာလီဖိုးနီးယားသို့ပြောင်းရန်စီစဉ်ထားသည့်တော်ဝင်တာ ၀ န်များမှခြောက်ပတ်အနားယူတော့မည်ဖြစ်သည်။ Meghan နှင့် Harry တို့သည်သူတို့၏အလုပ်အတွက်ယူကေ၊ ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့်အာဖရိကတို့တွင်အခြေစိုက်စခန်းသုံးခုတည်ထောင်ရန်ကြိုးစားနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။
ဒီကိစ္စကိုရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်သူ Nick Bullen က "Meghan President for?" တွင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး Sussex ၏ Duchess of Duchess ရုပ်ရှင်အကြောင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အသစ်ဖြစ်သည်။
အစီအစဉ်တွင် Meghan ၏နိုင်ငံရေးရာထူးအတွက်လျှောက်ထားခြင်းခံရသည်။
Meghan သည်တော်ဝင်မဖြစ်မီနှင့်အပြီးအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပါအ ၀ င်ကိစ္စရပ်များကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင်မစ္စတာ Bullen က“ သူတို့သိတဲ့လူတွေဟာကယ်လီဖိုးနီးယားမှာတည်းခိုဖို့နဲ့ Thanksgiving ကိုလာဖို့ကြိုးစားနေတာကိုငါကြားတယ်။
"Meghan တကယ်ပဲ Archie ကြီးထွားချင်တာကိုသူ့အမေရိကန်ရင်းမြစ်တွေကိုနားလည်စေချင်တယ်" (ရုပ်ပုံ: Getty)
ဂရိတ်ဗြိတိန်စစ်ပွဲသေဆုံးခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုတွင် Meghan နှင့် Harry (Image: GETTY)  "Meghan ၏အမှန်တရား Archi သည်သူ၏အမေရိကန်ရင်းမြစ်များကိုနားလည်ရန်ကြီးထွားလာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်အလွန်မျှော်လင့်ပါသည်။
သူ၏အမေရိကန်အမွေအနှစ်များသည်သူမအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့၏အခြေစိုက်စခန်းသုံးခုရှိကောင်းရှိနိုင်သည့်ကမ္ဘာကြီးကိုကျွန်ုပ်မြင်နိုင်သည် - ယူကေတွင်အခြေစိုက်သည်၊ သူတို့၏တော်ဝင်တာဝန်များ၊ သူတို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ပြည်နယ်များရှိအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အာဖရိကမှာသူတို့နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အလွန်အမင်းအရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ "
Meghan နှင့် Harry တို့သည်ယခုနှစ်အစတွင်တောင်အာဖရိကသို့အလည်အပတ်ခရီးလာခဲ့သည်။
ဟယ်ရီလည်းအချိန်ယူခဲ့တယ်။ ခရီးစဉ်အတွင်းအင်ဂိုလာ၊ မာလာဝီနှင့်ဘော့ဆွာနာနိုင်ငံများမှဖြစ်သည်။
ဆက်ဖတ်ရန်: ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပြီးနောက် Meghan Markle နှင့်မင်းသားဟယ်ရီ
"Meghan တကယ်နေရာတစ်ခုလိုသည်။ Los Angeles မှာ (ရုပ်ပုံ: Getty)
ဘုရင်မမှသူငယ်ချင်းတစ် ဦး က Sun အားပြောကြားခဲ့သည်မှာ "Meghan ဟာ Los Angeles မှာနေရာတစ်ခုအမှန်လိုချင်တယ်။
ဟောလိဝုဒ်သည်သူမ၏ DNA တွင်ရှိနေပြီး၎င်းသည်သူမအမြဲတမ်းခိုင်မာသည့်ခြေထောက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားလိုသည့်နေရာဖြစ်သည်။
 Meghan Markle သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေစတင်ခဲ့သည်ဟုကျွမ်းကျင်သူကပြောကြားသည် [ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း]
Meghan သည်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်သူ၏နေရာကိုယူမည်လား။ [စုံစမ်းစစ်ဆေး]
အဘယ်ကြောင့် Cornwall ၏ Duchess ၏ကတိကဝတ်ဖျက်သိမ်း? [ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း]
"သူကနောက်ဆုံးတော့ကာလီဖိုးနီးယားမိန်းကလေးပါ။ (ရုပ်ပုံ: Getty)
ဟောလိဝုဒ်သည်သူမ DNA တွင်ရှိနေပြီး၎င်းသည်သူမအနေဖြင့်အမြဲတမ်းခိုင်မြဲနေလိုသည့်နေရာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ (ရုပ်ပုံ: Getty)
Duke နှင့် Duchess သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားသို့ Thanksgiving သို့လာရောက်ရန်မျှော်လင့်ရသည်။  Meghan ၏သူငယ်ချင်းကဆက်ပြောသည်မှာ "အဲ့ဒီမှာအချိန်ဖြုန်းခြင်းကသူ့အားနန်းတော်နှင့်စာနယ်ဇင်းများမှလွတ်လပ်မှုနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်အချို့ရရှိစေလိမ့်မယ်၊ သူ့ဘ ၀ နှင့်သူ့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများအပေါ်ပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
သူမဟာဗြိတိန်မှာဘုရင်မတစ် ဦး ဖြစ်ပေမယ့်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မှာဘုရင်မတစ်ပါးဖြစ်နိုင်တယ်။
Meghan ကို California ရှိ Los Angeles တွင် 1981 တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ 
Meghan နှင့် Harry ၏သားသည်ပလ္လင်ပေါ်မှာသတ္တမမြောက်ဖြစ်သည် (ရုပ်ပုံ: Getty)
သူ၏မိခင် Doria Ragland သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်နေထိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
Meghan နှင့် Harry သည် Windsor Castle အနီး Frogmore Cottage တွင်နေထိုင်ကြသည်။
အိမ်ခြံမြေကိုအခွန်ထမ်းမှငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသောပေါင် 2,4 သန်း၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ယခုနှစ်တွင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည်။
မင်းသားဟယ်ရီသည် Oprah Winfrey နှင့် Apple TV တွင်တီဗွီအစီအစဉ်တစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်သည် (ရုပ်ပုံ: Getty)
မင်းသားဟယ်ရီသည် Oprah Winfrey နှင့် Apple TV + ပွဲများတွင်လည်းအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။
Apple TV + သည် streaming ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
တော်ဝင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာ - ကိတ်ဟာဘီဘီစီအကြောင်းလျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ပြီးသူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြပွဲကိုပြနိုင်မယ်လို့အရိပ်အမြွက်ပြောကြားသည်
Meghan Markle နှင့် Prince Harry တို့က Instagram ကိုအကျပ်အတည်းအဖြစ်သို့ပို့ရန်ကြေကွဲဖွယ်ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်